Yangu Kumba Dhizaini Kurota Mod Menyu Apk Dhawunirodha Mahara Kune Android
Posted: October 16, 2021 October 16, 2021
Iwe unoda here kushongedza imba yako uye dhizaini? Kana zvirizvo, saka unofanirwa kutora iyo Yangu Home Dhizaina Kurota Mod Menyu. Unogona kurodha apk yemahara yemutengo.
Muchikamu chino, ini ndichaenda kuburitsa pachena zvimwe zvezvinhu zvakavanzika zvauchazove nazvo mumutambo uyu. Asi kutanga, iwe unofanirwa kuisa iyo Apk pane kurodha pasi.
Chii chinonzi Imba Yangu Dhizaina Kurota Mod Menyu?
Maitiro EkuDownload uye Kuisa Yangu Imba Dhizaini Kurota Mod Menyu Apk?
Yangu Imba Dhizaini Kurota Mod Menyu ndeye yemahara nhare mbozha iyo ndiyo yakagadziridzwa vhezheni yeiyo yepamutemo app. Nekudaro, iwe unogona kuve neyakaganhurirwa mutambo wemari kana mari, zvakavhurwa maficha, uye zvimwe zvakawanda zviwanikwa zvemitambo. Iyo yemahara uye iwe unogona kuitora kubva peji ino.
Ndakagovanisa yazvino modded vhezheni yeapp iyo inoenderana kumhanya neyekutsva nyowani yemutambo wepamutemo. Nekudaro, iyo ndiyo sarudzo yakanakisa yekuti iwe uedze izvo zvakagadziridzwa maficha ane modded menyu. Iwe unongofanirwa kugonesa izvo sarudzo uye wozoona kukanganisa.
Uyezve, haufanire kunge uine chero rudzi rwemamwe mafaera senge OBB uye Dhata. Nekudaro, ingo dhawunirodha pasuru faira uye riise pane yako foni. Iyo kuvhura iyo uye ipapo iwe uchazobvunzwa kuti upe imwe yakakosha mvumo iyo iwe yaunofanirwa kugonesa kana kupa kune iyo app.
Uyezve, zvakakosha kuti iwe ubvise kana kudzima iyo yepamutemo mutambo kubva kuchinhu chako. Zvikasadaro, hazvishande kana kusaisa pane yako foni. Uyezve, iwe unozopedzisira uri wepamutemo kana ukasabvisa iyo yepamutemo app kubva kune yako Android smartphone.
Saka, iyi ndeimwe yeakanakisa shaya hanya mitambo yaunogona kurodha pasi uye kutamba pafoni yako. Asi kune mamwe mamwe maapplication akafanana aunogona kuedza pafoni yako kuti unakirwe nenguva yako yemahara. Unogona zvakare kuedza Ngirozi Kurwisa 3D uye Super Perro Mike Apk.
zita Yangu Kumba Dhizaini Kurota Mod Menyu
zera 162.6 MB
Developer ZenLife Mitambo Ltd.
Package Zita com.spacegame.homedesign
chikamu Games / shaya hanya
Vamwe venyu vanogona kunge muine ruzivo rwakakura pamusoro pekugadzira dzimba uye kushongedza. Nekudaro, Yangu Kumba Dhizaini Kurota Mod Menyu ipuratifomu paunotomboita izvozvo. Kune akasiyana marudzi ema templates, dhizaini, uye zvimwe sarudzo kuti ugone kuzvishandisa.
Iwe unongofanirwa kusarudza imba yekutanga uye nekuivaka kana kuitenga. Iwe unowana mhando dzakasiyana dzesarudzo mumutambo chaimo. Saka, izvo zvinonakidza uye zvinonakidza. Kana iwe uchifunga kuti iwe unogona kuzviita uye uchida kuhwina zvinoshamisa mibairo, saka iwe unofanirwa kuzviedza.
Iwe unogona kuve unogadzira imba uye uwane mari zviwanikwa. Nekudaro, iwe unogona kuwana zviwanikwa uye wozvishandisa kutenga zvimwe zvinhu zvepamberi uye kuvhura zvimwe maficha. Iyo inguva yakanakisa yekuti iwe utore sezvo ini ndakagovana mod vhezheni iri kupa zvese zveprimiyamu zvinhu mahara.
Ini ndakagovana yazvino yakagadziriswa chinongedzo cheiyo mod vhezheni yemutambo. Kana iwe uchitsvaga iyo yepamutemo iyo, saka unofanirwa kushanyira iyo Play Store yeiyo.
Nekudaro, kana iwe uchida kutora iyo yakarongedzwa uye yakazara yakavhurwa mutambo, saka unofanirwa kurodha pasi kubva peji rino. Ndakagovana chinongedzo chaipo kumagumo.
Saka, pfuurira pasi pasi pezasi peji rino kwaunowana chinongedzo cheiyo Apk. Dhawunirodha pasuru faira, riise uye worimisikidza parunhare rwako. Wobva wagonesa kana kupa mvumo inodiwa.
Saka, izvo zvese zvinobva pakuongorora uku. Iye zvino unogona kudhawunirodha Yangu Imba Dhizaini Kurota Mod Menyu Apk uchishandisa chinopihwa chinongedzo pazasi.
Click kugoverana musi LinkedIn (Unozaruka pahwindo itsva)
Click kugoverana musi Reddit (Unozaruka pahwindo itsva)
Click kugoverana musi Tumblr (Unozaruka pahwindo itsva)
Click kugoverana musi Pinterest (Unozaruka pahwindo itsva)
Posted in Games, shaya hanyaTagged shaya hanya, Yangu Kumba Dhizaini Kurota Mod Menyu, Yangu Kumba Dhizaini Kurota Mod Menyu Apk, Yangu Yekumba Dhizaina Mod Menyu Download
Kopiraiti © 2004-2021 [APKShelf]